हाइट महात्म्य | Alankar's Blog
Posted on 10/24/2010 by अलङ्कार अर्याल
हाइट बढेन भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ, उमेर छदै क्याल्सियम खाए त ठिकै हो, नत्र 'बाउ आमा पुड्का भएर आफु नि पुड्को भैयो' भन्दै सरापेर काम चाहिँ छैन । बाइस वर्ष काटे पछि टेलिसॉप नेपाल जस्ता 'हाइट एन्क्रिज' का चक्की खानु भनेको पैसा धेरै भएर खाल्टोमा फल्या जस्तै हो ।
मलाई पनि हाइट बढेन भनेर खुब चिन्ता हुन्थ्यो । अग्ली केटीहरुसंग बिहे गर्न पाईदैन भनेर :P उहिलेका कुरा खुइले ! केटीहरु आजकल हाइट भन्दा नि तीनओटा "म" को पछि लाग्छन रे । मोबाइल, मोटरबाईक र मनि । मोबाइल र मोटरबाईक त जोडजाड गरियो अब मनि छैन :) लेख्दा लेख्दै आफ्ना कुरा सब पर्दा फास होला भन्ने डर ! :) यो त भए मेरा भित्री कुरा, अब खास कुरा तिर लाग्छु ।
कतिलाई त हाइट नभए सफल पनि भईन्न की भन्ने डर पनि लाग्दो रहेछ । नडराउनुहोस् डराउनु नै पर्दैन । कुन कुरामा सफल हुनु पर्यो त्यहिँ त्यहिँ उदहारण छन् प्रसस्त मात्रामा । तानाशाहहरु कै कुरा गरौ न त । नेपोलियन बोनापार्टको हाइट ५ फूट ७ इन्च थियो । हिटलर जसले विश्वलाई नै थर्काइदिये उनको हाइट जम्मा ५ फूट ६ इन्च थियो जुन त्यस ठाउँको मध्यम खालको हाइट हो । अझ स्टालिन को त जम्मा ५ फूट ४ इन्च रे । केटाको मात्र लेख्यो भन्नु होला महिला मित्रहरु , महारानी भिक्टोरियाको हाइट जम्मा ५ फूट थियो !
फिल्ममा हिरो हिरोइनको हाइट धेरै देख्नु भएको होला तर हामीलाई कहाँ देखाउछन् त ३-४ इन्च सम्म हाइट बढाउने जुत्ता । ख्याल गर्नुस न ब्र्याड पिटको फिल्ममा उसको जुत्ता । इभा लंगोरिया र हिलारी डुफले पनि त ५ फूट भएर पनि थुप्रै फिल्म खेले नि ।
सचिन रमेश तेन्दुलकर जसको हाइट जम्मा ५ फूट ४ इन्च छ विश्व क्रिकेटका एक दिवसीय होस् की पाँच दिवसीय खेल होस् सबै भन्दा बढी रन उनकै छ । टेस्ट क्रिकेटमा दोस्रा अस्ट्रेलियाका कप्तान एवं ब्याट्सम्यान रिकी पोंटिंग जो ५ फूट १० इन्च छन् कहिले सचिनको रेकर्ड तोड्ने ? विश्वकप फूटबल पनि अस्ति भर्खर सक्कियो लिओनेल मेसी र डिएगो म्यारोडोनाको हाइट त आफै देख्नु भएको होला ।
धेरै अग्लो भए बुढेसकालमा कुप्रो परिन्छ, के बुढेसकालको कुरा गर्नु उमेरमै ठमेल, असन, भक्तपुर, ललितपुरतिरका घरहरुमा छिर्दा होस् पुगेन भने टाउको ठोक्किने डर ! हाइटले न खान दिन्छ न लाउन दिन्छ । न हाइट भएर जागिर पाईने हो । बाँच्न माम खान पर्छ माम खान दाम चाहिन्छ अनि दाम कमाउन काम गर्नु पर्छ । अझ भनौ दिमाग चलाउनु पर्छ । हाइट छैन भनेर चिन्ता गर्नु त वाइयात कुरा हो । चिन्ता लिएर न हाइट बढ्छ न चिन्ताले हाइट बढाउने होर्मोनको विकास गरिदिन्छ । बुबा आमाको हाइटपनि हेर्नुस छोटा कदका हुनुहुन्छ भने चिन्ता गरेर फाइदा छैन । घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्छ । बिद्यार्थी हुनुहुन्छ भने मन लगाएर पढ्नुस , जागिरे भए राम्रोसंग काम गर्नुस आफ्नो बाहुबल प्रयोग गर्नुस , दिमाग खियाउनुस । आमिर खान जस्तो मिस्टर पेर्फेक्सन बन्नुस न, सफलताले आफै तपाईलाई पछ्याउछ । की कसो ?